The Gardener: Zephyr's Notes
အခုတလော ဘာရယ်မဟုတ်ဘဲ သံဝေဂတွေချည်း သပိတ်ဝင်အိတ်ဝင်ရနေတယ်။ ပါရမီသာပါရင် အခုအချိန်လောက်ဆိုရင် တောထွက်မိသွားလောက်ပြီ။ အခုတော့ပါရမီနည်းတော့ ဟန်ဒါဆန်ဝေ့ဖ်လောက်အထိပဲ လမ်းထွက်လျှောက်ပြီး ပြန်လာနေမိတယ်။
အခုတလော ရပ်ကွက်ထဲမှာကြားရတာက သွားလေသူကြီးများခမျာ မြို့မေတ္တာခံယူတဲ့သားများသာဖြစ်နေကြောင်း၊ ဂီတပါရမီရင့်သန်ကြောင်း၊ တစ်မိပေါက်တစ်ယောက်ထွန်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုတစ်မိကို အလားတူနှစ်ယောက်မမွေးပေးလိုက်သောကြောင့် မမြင်ဖူးပေသည့်တိုင် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြကြောင်း။ မှတ်မိနေသော စာသားလေးအနည်းငယ်အခါအခွင့်သင့်တုန်းရွတ်ဆိုခွင့်ပြုပါရန် .......
I am very fond of sunsets. Let's go this moment and look atasunset.
But we shall have to wait....
Wait until it's time for the sun to set ...............Eupery ရဲ့ The Little Prince ထဲက ဇာတ်ကွက်လေးပါ။ နေ၀င်ချိန်အထိတော့ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာ .....။ နေ၀င်သွားတာကို စောင့်မှ နေ၀င်ချိန်ကိုမြင်ရတတ်သလို ... အပြောင်းအလဲဆိုတာကလည်း စောင့်ကြည့်ရင်မြင်ရတတ်ပါတယ်။
Self-repect and honor cannot be protected by others ဆိုတဲ့ ဂန်ဒီကြီးရဲ့ စကားကိုလည်း ကြားယောင်မိပါတယ်။ လူတစ်ယောက်မှာ ဂုဏ်သိက္ခာမရှိတော့ရင် ဘာတွေကျန်သေးလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်။ တခြားအရာတွေကျန်နေသေးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားစရာလေးမှ မကျန်တော့ရင်လည်း အတော်လေး အခံရခက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီဘိုးနိုးကြီးကစာအုပ်တစ်အုပ်ရေးပါတယ်။ Think!! before it's too late. ဆိုတဲ့စာအုပ်ပါ။ လူဆိုတာ တွေးတတ်တဲ့သတ္တ၀ါဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အတွေးအခေါ်ကောင်းတာကို သဘောကျမိပါတယ်။ ၄ နှစ်သားလောက်ပဲရှိတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကိုမိဘတွေက ဘုရားတွေလိုက်ပို့ရင်း တွေ့သမျှ ရုပ်ပွားတော်ဦးချခိုင်းတော့ ပထမတော့ကလေးက ဦးချပါတယ်။နောက်တော့သူလည်း ပျင်းလာပုံရပါတယ်။ မြေကြီးပေါ်လဲချပြီး ၃၆၀ ဒီဂရီ ဦးချပစ်လိုက်ပါတယ်။ သူအားလုံးရှိခိုးပြီးသွားပြီလို့ပြောပါတယ်။ အဲဒီလိုကလေးတွေ ဥာဏ်ကောင်းသလို လူကြီးတွေလည်း ဥာဏ်ကောင်းဖို့လိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင် တူကြီးလျှင်ပေ၊ လူကြီးလျှင်တေ ဆိုတာမျိုး၊ ယောင်ကြီးလျှင်ငိုက်၊ လူကြီးလျှင်မိုက်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ံHerbert Simon ဆိုတာ Phychologist တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကြောင့် saisfice ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးတိုးလာပါတယ်။ satisfy နဲ့ suffice ကိုပေါင်းလိုက်တာပါ။ တစ်ခြားသူတွေရေးရင်စာလုံးပေါင်းမှားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် Simon ကိုကြတော့ထွင်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ Shakespearစာတွေ ဆိုရင် နားလည်ဖို့သူ့အတွက်သီးခြားထုတ်ရတဲ့အဘိဓာန်အတွဲလိုက်ထုတ်ရပါတယ်။ မတူညီမှုဟာ Distinct ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ခုနားလည်ထားရမှာက ဆင်သွားရင်လမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဆင်ပါတဲ့ ကြက်ဆင်တွေအတွက် စကားပုံမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းသိသင့်ပါတယ်။
စာများများဖတ်ထားတာဟာ ပရုဖ်ရီဒါတစ်ယောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ ပညာတတ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့တော့ အာမမခံနိုင်ပါဘူး။ လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့လည်း အာမမခံနိုင်ပါဘူး။ စာကြောင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိပါတယ်။ တကယ်ရိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့စာကိုဖတ်နိုင်ဖို့နဲ့ ကောင်းတာတွေကို ကိုယ်ပိုင်လုပ်နိုင်ဖို့ဟာ စာပေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မဖြစ်ချင်လည်းမဖြစ်ပါဘူး။ သတင်းစာကို နှစ်ခြောက်ဆယ်ဖတ်လာတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ နာရေးနဲ့ကြော်ငြာအကြောင်းအတော်လေးသိတာကလွဲရင် ဘာမှ ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ထားလည်းမကောင်းတဲ့အပြင် စာထဲမှာပါတာတွေမှတ်မိတဲ့သူတွေကတော့ လက်ပေါက်ကပ်တဲ့ အငြင်းသမားတစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးဖြစ်လာစရာမရှိပါဘူး။ စာဖတ်နာတယ်ဆိုတာဟာလည်း စာကိုနားလည်တယ်လို့အာမခံချက်မပေးနိုင်ပါဘူး။ ၂၀၁၀ မှာ သင်ဖတ်ဖူးသမျှဟာ ၆၀ တန် portable hardisk ထဲက အချက်အလက်တွေနဲ့ယှဉ်ရင်တောင် အတော်လေးနည်းနိုင်ပါတယ်။ Knowledge is cheap now. စာများများမဖတ်ပေမယ့်ကိုယ်ပိုင်အမြင်ရှိတာဟာ ချောင်းဆိုးခါနီးတောင် အကိုးအကားနဲ့ဆိုးရတဲ့ စာဖတ်နာသူတွေထက်တော့ သက်သောင့်သက်သာရှိပါတယ်။
အဲဒီလိုပြောရင် ဖီလော်တက်ခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက သော်ကားတယ်လာပြောနေကြမယ်။ ဟိုတစ်လောကဖတ်လိုက်တာတစ်ခုက Don't think if you can google တဲ့။ Google မှာရှာလို့ရရင်မတွေးနဲ့တဲ့။ အဲဒါက တကယ်တော့စေတနာနဲ့ပြောတာပါ။ ကိုယ့်ထက်ကောင်းတဲ့ ခေါင်းတွေရှိနေရင် သိပ်အပင်ပန်းမခံပါနဲ့။ ရှေ့ဘ၀က ကိုယ်မဟုတ်တဲ့သူက အကုသိုလ်လုပ်လို့ သူမဟုတ်တဲ့ကိုယ်က ခံနေရတာ မတရားဘူးတွေ ဘာတွေ အော်မနေပါနဲ့ ....။ သက်သောင့်သက်သာနေပါ။ ခေါင်းနဲ့တန်သလောက်တွေးပါ။
အဲဒီလိုပြောရတာလည်းကိုယ်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းရာရောက်ပါတယ်။ ကမ္ဘာရွာကြီးဆိုတဲ့စကားတောင် အခုအချိန်မှာ Cliche ဖြစ်နေပါပြီ။ ကမ္ဘာကို မြေပုံမပေါ်ခင်က အနေအထားပြန်ရောက်နေတာ အတော်လေးကြာပါပြီ။ မြေပုံတွေပေါ်လာတော့မှ နိုင်ငံတွေသတ်မှတ်ပြီး မျဉ်းလေးတွေကို ကြည့်ပြီး ကိုယ့်နှိုင်ငံ၊ သူ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ကုန်တာဆိုတော့ မြေပုံတွေမပေါ်ခင်ကဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးဟာ နေထိုင်စရာတစ်ခုတည်းသော နေရာကျယ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဟန်ပြဗန်းပြ ပညာရေးနဲ့ တကယ်တော်တဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကိုမွေးမထုတ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကို သိဖို့အချိန်အတော်နှောင်းနေပါပြီ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ပညာတတ်အညွှန်းကိန်းဟာ ဘွဲ့ရဆိုက်ကားသမားဦးရေနဲ့တိုက်ရိုက်အချိုးမကျသလို စပယ်ယာလိုက်နေတဲ့ အဝေးသင်ကျောင်းသားအရေအတွက်နဲ့လည်း အချိုးမညီပါဘူး။ သိပ္ပံပညာရှင် ဘယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့သလဲ။ လူများလုပ်ထားတဲ့ tHESIS ထဲကမကူးတဲ့ mASTER ဘယ်နှစ်ယောက်မွေးထုတ်ပြီးပြီလဲဆိုတာကနေ စပြီး ... ကျူရှင်တက်နေရတဲ့မူကြိုကျောင်းသားကြီးပြဿနာအထိ ရှုပ်ထွေးနေပါတယ်။ အဲဒီလောက်သင်နေတာတောင်မတတ်တာဟာ ပညာရေးကိုက သင်လို့မတတ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ မလိုအပ်ဘဲ မြန်မာစာကို နှစ်ပေါင်းများစွာသင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုလည်း နားမလည်ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်တွေကို ဆယ့်သုံးနှစ် အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးတဲ့ကျောင်းတွေမှာ တက်ခိုင်းကြည့်ရင် သူတို့လည်း အင်္ဂလိပ်စကားတောင်ကောင်းကောင်းပြောတတ်ပါတော့မလားတွေးမိပါတယ်။ ဘာသာစကားကို စာလိုသင်ရင် ဘာသာစကားလည်းမတတ်၊ စာလည်းမတတ်များဖြစ်ကုန်သလားဆိုတာလည်းတွေးကြည့်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ပညာရေးဟာ ကလေးတွေကို သဘာဝကို စိတ်ဝင်စားစေရပါမယ်။ ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတာကို စူးစမ်းစေရပါမယ်။ ဒါကြောင့်ဆိုတာကိုပဲ အဖြေတွေပေးနေတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ဟာ လမ်းဘေးမှာ တွေ့နေတဲ့ ဈေးသည် ၁၂၀ ကိုမေ့ပြီး စာအုပ်ထဲက ခေါင်းရွက်ဗျက်ထိုး ဈေးသည်ငါးမျိုးမှာပဲ ဂိတ်ဆုံးသွားပါတယ်။ သင်္ချာကို အဆင်မြင့်သင်္ချာဆိုတာတွေကိုပဲ ငါးနှစ်လောက် သင်ခဲ့ပေမယ့် အဲဒီသင်္ချာကို ဘယ်နေရာမှာ သုံးမှန်း နောက်ထပ် ငါးနှစ်အကြာမှသိပါတယ်။ ကျောင်းပညာရေးဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ဘက်စုံအော်နေအော်နေ ဘက်စုံထူးချွန်မှုကို အားမပေးပါဘူး။ ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဟာ စိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာရပ်ကိုပဲ သင်ယူလို့မရနိုင်တာလဲ။ ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဟာ အရည်အချင်းပြည့်မီတဲ့စိတ်ရှည်တဲ့ဆရာတွေနဲ့ သင်ယူခွင့်မရတာလဲ။ ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စာကြည့်တိုက်တွေဟာ ပျော်စရာနေရာမဖြစ်တာလဲ။ ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေဟာ ကိုယ်ခန္ဓာအလးချိန်ရဲ့နှစ်ဆရှိတဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ကျောင်းကိုသွားနေရတာလဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ တခြားနိုင်ငံက သာမန်လူတွေထက် ဥာဏ်ပိုကောင်းရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ မလိုအပ်ဘဲ ကျောင်းတွေမှာ အချိန်ပိုဖြုန်းကြရတာလဲ။ ဘာလို့ကျွန်တော်တို့တွေဟာ မလိုအပ်တဲ့ဘာသာတွေကို အချိန်တွေအများကြီးပိုပေးပြီး ခဲရာခဲဆစ်ကျက်ခဲ့ကြရတာလဲ။ ကွှန်တော်တို့တွေဟာ ညံ့မှာကြောက်လို့ ပိုညံ့သွားတယ်လို့ထင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကလေးတွေကို လုံလုံလောက်လောက်ညံ့ခွင့်ပေးသင့်တယ်။ ကျောင်းမှာ ထိုင်းသွားတဲ့ဥာဏ်ရည်ကို အိမ်မှာ ဖွံ့ဖြိုးအောင်ကြိုးစားသင့်တယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ကို မွေးကတည်းက အန်ဆိုက်ကလိုပီးဒီးယားကို အလွတ်ကျက်ခိုင်းရင် သူ့အသက် ၃၅ နှစ်လောက်ဆို အတော်လေး ချက်ချက်ချာချာဖြစ်နိုင်လာပါတယ်။ အန်ဆိုင်ကလိုပီးဒီးယားအပြင် ပိဋကတ် သုံးပုံကိုပဲ အချိန်ပိုင်းကျက်ခိုင်းထားလိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေ အတော့်ကို ပြည့်စုံသွားမှာလို့ထင်တဲ့သူတွေလည်းထင်ပါတယ်။ အဲဒီ အချက်အလက်အသားပေး ပညာရေးကို စိတ်ပျက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ သုညကို ဘယ်ကရသလဲဆိုတာကို သင်ပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးလိုပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နာရီရှိရင် အနာလော့က် နာရီကြည့်တတ်ဖို့မလိုဘူးဆိုတာကိုလည်းလက်ခံပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးလိုပါတယ်။ ကလေးတေစ်ယောက် စာသင်ခန်းထဲမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် သင်လို့မတတ်ရင် ပျော်ရွှင်စွာသင်နိုင်တဲ့ ကစားကွင်းမှာစာသင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ မပျော်ရင် စာသင်လို့မရဘူးဆိုတာကို ယုံကြည်တဲ့ဆရာတွေကိုယ်တိုင် ကမ္ဘာမှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအဖျက်လက်နက်ဟာ အသုံးမကျတဲ့ဆရာတွေဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်။ အခြေခံမှာမှားယွင်းခဲ့တဲ့ပညာရေးဟာ အဆင့်မြင့်တဲ့အခါ ပိုပြီးမှားယွင်းလာပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ MIT က course သင်တယ်ဆိုပါစို့ ... မြန်မာပြည်ရဲ့ အင်ဂျင်နီယာဟာ MIT ရဲ့ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မလာသေးပါဘူး။ Course ထက် အရေးကြီးတာတွေရှိနေပါသေးတယ်။ ပညာရေးဟာ ကလေးကစားသလို ရွံ့နဲ့အရုပ်လုပ်သလို ဆော့စရာမဟုတ်ပါဘူး။ Selected Few တွေမရှိဘဲ Bottom Zeros တွေကို phD ပေးနေရတဲ့ပညာရေးရဲ့အလားအလာကိုလည်း ရင်လေးပါတယ်။ သင်နေတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင် ကိုယ့်ဘာသာတတ်ပြီလားမေးဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်မသိတဲ့သူဟာ တပည့်တွေကို ဘာတွေသင်မယ်လို့စိတ်ကူးထားသလဲဆိုတာကိုက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ဒါတွေပြောရင် ဒေါတွေပါကုန်ပါမယ်။ အခြေခံမကောင်းရင် ဘာပဲလုပ်လုပ် အတော်ကြီးခက်ခက်ခဲခဲလုပ်ရပါတယ်။ လေ့လာတဲ့နည်းစနစ်မှန်ရင် ဘာပဲသင်သင် အလွယ်တကူတတ်နိုင်ပါတယ်။ အခြေခံမကောင်းတာကို မကောင်းမှန်းမသိတာက အတော်လေးကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ မေးခွန်းထုတ်တတ်ဖို့ဦးစားပေးတဲ့၊ လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အမြင်ကို အလေးထားတဲ့ပညာရေးစနစ်ရှိလာရင် တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ အတွေးအခေါ်ကိုလည်း ဖော်ထုတ်နိုင်လာတဲ့ပညာရေးဖြစ်လာပါမယ်။ အခြခံကိုက ကျူရှုင်တက်ရတဲ့မူကြိုဆိုရင်တော့ .....ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်သင့်တာ ဈေးသက်သာတဲ့ ပုဂ္ဂလိကပညာရေးပဲဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ............။
Bottom Billion အတွက်ဒုတိယနည်းလမ်း
ဒါကိုတင်ပြတာကတော့ ကမ္ဘာက ပညာရှိတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ ပေါက်ကရတွေအမျိုးစုံပြောလေ့ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျိုလီဟာ ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံက ကလေးသုံးယောက်မွေးစားတဲ့အတွက် ကမ္ဘာမှာ ဂျိုလီလိုလူ 0.35 billion ဖော်ထုတ်ဖို့ပဲလိုတယ်လို့သူက သုံးသပ်ပါတယ်။ သူအယူအဆကိုတော့ သူ့ဘာသာသူ အတော်လေးခိုင်မာပုံရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အသင်းဖွဲ့တာကိုတင်ပြပါတယ်။ ဆင်းရဲသားတစ်သိန်းပါတဲ့အသင်းဆိုပြီး အသင်းလေးတွေဖွဲ့ထားပြီး ဘောလုံးကလပ်ပိုင်တာထက် ဆင်းရဲသားတစ်သင်းပိုင်တာက ပိုဂုဏ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အန်တာတီးကားမှာ ရေခဲတွေပျော်တယ်ဆိုတုန်းကလည်း သူက မြန်မာပြည်က ရေခဲစက်တွေကရေခဲတွေအန်တာတီးကားကိုပြန်မျှောဖို့ဘာလို့မကြိုးစားတာလဲ
ဆိုတဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့ အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ဖူးပါတယ်။ အခုလည်း သူ့ရဲ့ အယူအဆအတွက် အထောက်အထားရှာနေပါတယ်။ Good Luck Buddy :)။ Here is my contribution for your research :
“I’m drawn to kids that are already born. I think some people are meant to do certain things, and I believe I’m meant to find my children in the world somewhere and not necessarily have them genetically.” (Jolie)
ရေလိုက်ငါးလိုက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို အိုင်ထဲကငါးတွေနားမလည်ကြဘူး။ တခါဖတ်ဖူးတာ လိပ်တွေဟာ ဘာလို့လမ်းမမှားကြသလဲဆိုတာကိုသတိရတယ်။ သူတို့တွေက ကမ္ဘာရဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်သဘောတရားကိုနားလည်ကြတယ်လို့ပါပါတယ်။ မွေးရာပါ ရူပဗေဒကျွမ်းကျင်သူလိပ်တွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ငါးတွေမှာလည်း ရေစီးကြောင်း၊ အထူးသဖြင့်ရေနွေးစီးကြောင်းနဲ့အတူလိုက်သွားတဲ့ငါးတွေအကြောင်းဖတ်ကြည့်ပါတယ်။ သူတို့ဘ၀ကြီးဟာအဲဒီရေစီးကြောင်းနဲ့အတူပါသွားတယ်။ ကြီးပြင်းတယ်။ အရွယ်ရောက်တယ်။ အိမ်ထောင်ကြတယ်။ တချို့ငါးတွေက ငါးပျိုကြီးတွေလုပ်တယ်။ သူတို့အတွက်တော့ အဲဒီရေစီးကြောင်းဟာ သံသရာပါပဲ .......။ တွေးကြည့်ဖို့ကောင်းတာက ကျွန်တော်တို့လည်း လူ့ဘ၀ရေစီးကြောင်းထဲမှာ ရေလိုက်ငါးလိုက်လုပ်နေတဲ့ငါးတွေနဲ့များတူနေပြီလားဆိုတာကိုပါ။ ပိုဆိုးတာက အဲဒီရေစီးကြောင်းက ဘယ်ကိုသွားနေတာလည်းမသေချာသေးတာပါပဲ။ ပြောင်းပြန်ပြန်ကူးမယ်ဆိုမှ ရေမကူးတတ်တော့တာ အတော်လေးကြာပြီဆိုတာကိုသတိရတယ်။ ကိုယ်ဖော့လိုက်လာတဲ့သက္ကရာဇ်တစ်ချို့အတွက် နည်းနည်းတော့ပြန်ပေးဆပ်ရဦးမှာပေါ့ ......။ ဘ၀ဆိုတာ စိတ်နဲ့တန်သလိုဖြစ်တာပဲမဟုတ်လား။
ရှေ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ဆိုရင် Blogနှစ်နှစ်ပြည့်ပါမယ်။ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ပို့စ်တွေပြန်ဖတ်ပြီး သုံးသပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မနှစ်က စိတ်ချမ်းသာသလို ဒီနှစ်လည်းစိတ်ချမ်းသာပါတယ်။ ဘ၀မှာ သိပ်အများကြီးမလိုပါဘူး .... စိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာနဲ့ ကိုယ်ဝါသနာပါတာကိုယ်လုပ်နေဖို့ပဲလိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Concerntration အများကြီးလိုအပ်တဲ့စာတွေကို မရေးဘဲပေါ့ပေါ့ပါးပါးတွေပဲရေးတာကလည်း ရုံးကနေဖတ်ရလွယ်ဖို့ပါ။ :P။